Fanabeazana : Tsy maintsy tanterahina ara-potoana ny fanadinam-panjakana -
AccueilSongandinaFanabeazana : Tsy maintsy tanterahina ara-potoana ny fanadinam-panjakana
Fanabeazana : Tsy maintsy tanterahina ara-potoana ny fanadinam-panjakana
14/06/2018 admintriatra Songandina 0
Manoloana ny fitokonana mpampianatra mbola maro be amin’izao fotoana izao, dia nanambara ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Horace Gatien, raha nandray ny fitantanana ny minisitera omaly fa laharam-pahamehana ny hamerenana ny fitoniana sy ny filaminana eo amin’ny sehatra ny fanabeazana. Notsindriany ihany koa fa tsy maintsy hotanterahina ara-potoana ny fanadinam-panjakana, ka tsy maintsy atao izay hiverenan’ny mpampianatra amin’ny toeram-piasany, ary mba hahafahan’ny mpianatra manao ny famerenan-desona sy ny fiomanana amin’ny fanadinana. Noho izany, mitaona ireo mpampianatra rehetra hiverina an-tsekoly ny tenany, ary ho an’izay mbola tsy resy lahatra dia hotohizana ny dinika. “Manentana ireo mpampianatra hamonjy ny sekoly aho. Izay mbola tsy resy lahatra kosa dia hotohizana ny dinika. Nampanantena ny sendika aho fa hihaona amin’ny tompon’andraikitra ambony ny minisitera, ary aorian’izay dia hanohy ny fifanakalozan-kevitra amin’ny sendika indray”, hoy ny minisitra Horace Gatien.
Haverina ny hasin’ny mpampianatra
Tsy misy afaka hitondra ny sehatra ny fanabeazana mihoatra ny mpanabe. Mahakasika izay indrindra, nampanantena ny minisitra fa haverina ny hasin’ny mpampianatra, ity farany izay tafiditra ao anatin’ny fitakian’ireo mpampianatra. “Efa am-pelatanako ny fitakian’izy ireo, maro dia maro ny zavatra ilainy sy takiany. Efa nihaona tamin’ireo sendika aho ka inoako fa ho hita tsy ela ny marimaritra iraisana. Tsy ho tanteraka daholo sy tsy hahazo fahafaham-po manontolo fa ny zava-dehibe dia ny efa nifanantonanay mba hitadiavana ny lalana hamahana tsikelikely ny olana mianjady amin’izy ireo. Anisan’ny fitakiana voalohany izay azo tanterahina tsy ela dia ny hanomezana hasina ny mpampianatra eo amin’ny fitantanana ny minisitera na eo amin’ny foibe na any amin’ny faritra hatramin’ny Cisco”, hoy hatrany ny fanazavana. Mahakasika ny drafi-pampianarana vaovao na ny PSE indray kosa dia nanambara ny minisitra fa	hotohizana ny asa efa natomboka, ary efa vonona ao ny vola hanatanterahana ny asa. Tontosa omaly teny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny fifamindram-pahefana teo amin’ny minisitra Rabary Paul sy ny minisitra Horace Gatien. Ny minisitra Rabary Paul izay nilaza fa afa-po tanteraka tamin’ny asa vita sy ny fiaraha-miasa teo amin’ireo mpiara-miasa teo anivon’ity minisitera ity.
Notanterahina omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, ny filankevitry ny governemanta voalohany notarihin’ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, Ntsay Christian. Taorian’izay dia nitafa tamin’ny mpanao gazety ny praiminisitra. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa mitaky fandraisana andraikitra ny ...Tohiny
Repoblikan’i Sina : NANOME 1 MILIARA AR HANATSARANA NY MAE
Faritra Atsimo:HANOMBOKA NY FAMPANDROSOANA
Travel & Leisure: Hi there, You've done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I'm…